ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : " လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဖြင့်သာ..အမေ..
" လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဖြင့်သာ..အမေ..
" လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဖြင့်သာ..အမေ.." (သုံးသပ်ချက်)
အန္ဒိယသမုဒ္ဓရာသို့ ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရရှိထားသော.ရခိုင်ပြည်နယ်. ကျောက်ဖြူဒေသကို
ဆုံးရှုံးရမည်စိုးသဖြင့် ရထာလမ်းရောကားလမ်းပါ အမြန်ဖေါက်နိုင်သလို..
ပညာရှင်တစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံကို ခေါင်းဆောင်လုပ်နေခြင်းမရှိမှ
သူတို့လဲ..ကြောက်ကြဦးမည်ဖြစ်သည်.. ၊ တစ်ချိန်က တိုင်းမှုးတွေရဲ့ နောက်ကြောင်းကို
စုံစမ်းခိုင်းရုံမျှနှင့်ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဖွဲ့လုံးကို မြေလှန်သော သာဓကကို ကြည့်ကြပါလေ..၊
အပိုဆာဒါးတွေ တစ်ခုမှမပါ ပါဘူး..၊
လွတ်လပ်စွာ. Share နိုင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ကဏ္ဍ " လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဖြင့်သာ..အမေ..